१४ वर्षीयाले पार्किङमा जन्माइन् बच्चाः आमाबुवाले भने, ‘हामी अचम्ममा छौं, » खबरहरुको एउटै केन्द्र
१४ वर्षीयाले पार्किङमा जन्माइन् बच्चाः आमाबुवाले भने, ‘हामी अचम्ममा छौं,
मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ १२:५५ मा प्रकाशित !
एजेन्सी -भारतको चन्दीगढमा बस्ने १४ वर्षीया किशोरीलाई आइतबार बेस्सरी पेट दुख्यो । पिडा बढ्दै गएपछि उनको परिवारले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याए । जब उनीहरु गाडीबाट ओर्लिएर पैदल हिँडिरहेका थिए तब ती किशोरीले पार्किङमा नै ६ महिनाको प्रि–मेचुअर शिशुलाई जन्म दिइन् । शिशुको जन्मने बित्तिकै मृत्यु भयो । पुलिसले मुद्दा दर्ता गरेर आरोपीको पहिचानका लागि अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ । यसबारे किशोरीसँग पनि सोधपुछ गरिएको छ तर बेलुकासम्म उनले केही पनि जानकारी नदिएको बताइएको छ ।
९ कक्षाकी छात्राः
स्रोतका अनुसार ९ कक्षाकी छात्रा उनी आफ्नो आमाबुवासँगै बस्दै आएकी थिइन् । आइतबार बिहानै किशोरीले आफूलाई अत्यधिक पेट दुखेको बताएपछि गाडी लिएर अस्तपाल पुगे । पार्किङमा गाडी राखेर पैदल हिँडिरहेका बेला उनलाई थप पीडा भयो । सहन नसक उनी भुइँमा बसिन् । त्यसको केही बेरमा किशोरीले शिशुलाई जन्म दिइन् । उक्त घटना सुरक्षागार्डले देखेपछि त्यहाँ डाक्टरको समूह पुगेको बताइएको छ ।
आमाबुवाले भने, ‘हामी अचम्ममा छौं, छोरी गर्भवती भएको थाहै थिएन ’
किशोरीका आमाबुवाका अनुसार उनीहरुलाई छोरी गर्भवती भएको थाहै थिएन । दुबै कामकाजी हुन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई कसैमाथि शंका पनि छैन किनभने हामीले यस्तो होला भनेर कहिल्यै सोचेका थिएनौं । साथै, छोरीले पनि कहिले यसबारे केही पनि भनेकी छैनन् । हामी त उनको पेट किन दुख्यो भनेर उपचारका लागि आएका थियौं । हामी चकित छौं । थाहा छैन हामीबाट कहाँ र कसरी गल्ती भयो ।’
किशोरीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको छ तर उनको रुटिन चेकअप भइराख्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, किशोरीको काउन्सिलिङ पनि भइरहेको बताइएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाइ
NEXT POST Next post: ‘तिमीलाई मनका कुरा भनु कसरी’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ १२:५५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ १२:५५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ १२:५५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ १२:५५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ १२:५५